Uyifumana njani i-Bushy Beard -Iingcebiso zamadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Iindevu ezityebileyo emadodeni luphawu lobungqongqo. Kangangeenkulungwane ezininzi, ukunxiba iindevu yayiluphawu lobudoda nakwamanye amadoda amaninzi, amandla nobulumko. Kubafazi abaninzi, ukubona indoda enentshebe kunokuyibeka kwindawo evuthiweyo, inamandla phantse kuyo yonke into.
Ukukhulisa iindevu okokuqala yinyani enemiba emininzi. Akukho nzima ukuqala ukubona ukuba iinwele zakho zikhula njani, kodwa mhlawumbi Ukufumana intshebe epheleleyo okokuqala kunokuba nzima kwaye nakwabanye umsebenzi phantse awunakwenzeka. Ngale nto siza kubona ezinye iingcebiso kunye namacebo okufumana esona siphumo.
1 Iindevu ezipheleleyo ziyafezekiswa ngexesha kunye nomonde
2 Iingcebiso zokuba nentshebe epheleleyo
3 Ezinye iingcebiso kunye namacebo okwenza iindevu ezipheleleyo
Iindevu ezipheleleyo ziyafezekiswa ngexesha kunye nomonde
Gcina ukhumbula ukuba ukukhula kweendevu ifuna inkqubo ende kunye notshintsho oluthile. Ayizukufana neendevu onazo ngoku oya kuba nazo emva kweenyanga, kwaye ayizukujongeka ngathi uza kuba nayo kwiminyaka embalwa. Iminyaka emininzi idlula iya kuba nabantu abaninzi ezo ndawo zazingekho ngaphambili.
Musa ukugweba ezo ndawo apho kunzima ukuphuma khona iinwele, ngakumbi kwikona yemilebe, embindini wamadevu okanye kwezinye iindawo emacaleni obuso. Ngokuhamba kwexesha kwaye ukuba unyamezelekile, unokuba nentshebe engqindilili. Ukuze ufumane iziphumo ezikhawulezayo nezisebenzayo sinokukunika uthotho lweengcebiso.
Iingcebiso zokuba nentshebe epheleleyo
Ukuqala kufuneka vumela iindevu zikhule ngexesha lakho lokuzonwabisa, ngaphandle kokucheba okanye ukugqiba nantoni na. Ukuyiyeka ikhule ubuncinci inyanga iya kuba lithuba elihle lokuba izinzile ngokuqinileyo. Ukuqala okanye ukuqala kokukhula kwayo akufuneki kube lula, kuba Xa ikhula ngokuthe ngqo kwaye ilukhuni, ibangela ukucaphuka kunye nokubamba Ukuba ukurhawuzelela kunganyamezeleki unokufaka ioyile ye-ndevu ekhethekileyo kwaye ukuba inokuba ne-vitamin E ngcono kakhulu.
Amadoda amaninzi kwiishawari zawo asetyenziselwa ukusebenzisa ijeli enye okanye ishampu yomzimba wonke, kubandakanya iindevu. Oku kunokuba yimpazamo enkulu, kuba a isepha ethile yentshebe kuya kunceda ukususa ubumdaka obufakwe kwizinwele zeenkomo ngcono kwaye ishiya inkululeko engakumbi yokukhula kweenwele. Kuyacetyiswa ukuba uthambise umzimba ngobunono kwaye usebenzise amanzi ashushu ukuze ukubamba kokutsha kuvuselele ukuhamba kwegazi.
Ukutya yinxalenye ebalulekileyo yokukhula kweenwele. Ziyacetyiswa ukuba zithathe ukutya okunotyebileyo kwi-biotin kuba yinxalenye ebalulekileyo yevithamini B enceda iinwele zikhule zisempilweni kwaye zomelele. Ungayifumana kwiingqolowa ezipheleleyo, amaqanda, amandongomane, iiamangile, ubisi, kunye nenyama enjengeenkukhu. Inkqubo ye- ukutya okunotye iivithamini A no-B, zinc, iron, antioxidants kunye ne folic acid kwaye usele amanzi amaninzi ukuze ube ne-hydration elungileyo.
Dlala imidlalo okanye wenze umkhwa wokuzilolonga rhoqo Kubalulekile ukuba ukwazi ukwandisa amanqanaba e testosterone, kunye noncedo lokutshintsha iinwele nolusu ngokulula. Ukongeza, iphucula imeko yeemvakalelo kunye nokuzithemba kwaye yinto yokuqala ukubona iindevu zikhula ngokulula.
Ezinye iingcebiso kunye namacebo okwenza iindevu ezipheleleyo
Idayi kwiindevu iyasebenza. Ukuba intshebe yakho iyahluka ngemibala kunye neetoni onakho khetha umbala owenza ukuba ufane. Umzekelo, umntu oneenwele ezimdaka kunye neendevu ezikhanyayo okanye iitoni ezimhlophe, ukuba ukhetha ukudaya ngombala ofanayo weenwele, kuya kuphinda kathathu ukuxinana kwakhe. Kodwa eli qhinga lisebenzela iindevu ezinemibala eyahlukeneyo kunye nokuqaqambisa umbala ukuyenza ibukeke ngathi zizinwele ezomeleleyo.
Olunye uluvo oluneziphumo ezilungileyo kakhulu kunye nohlahlo-lwabiwo mali olukhulu kukuba yenza intshebe Ngale ndlela, ngokufuna iindleko eziphezulu, sele yamadoda acinga ukuba afuna ngokwenene ukuba neendevu. Kule meko sithetha ngokuphinda sigcwalise ezo ndawo ezinje ngamadevu, izidlele, isilevu kunye nokutshiswa ecaleni, apho iinwele zingakhuli rhoqo.
Inkqubo yayo ilula, ukumiliselwa kweendevu kuyakwenziwa ngokukhupha iifollic zincinci ezincinci ngasemva kwesikhumba, ziyenze ngemicu encinci kwaye uyibeke kwiindawo apho ifuneka khona. Emva kweeveki ezimbini, uya kuba nakho ukuphila ubomi obuqhelekileyo. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga nokhathalelo lweendevu ungabonisana 'olona nyameko lukhulu' okanye ufumane 'kutheni iindevu zingakhuli emadodeni'.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uyifumana njani intshebe epheleleyo
Eyona mibala yeenwele emadodeni